Apo vana vari kutamba panze - mufambiro wakanaka pakunaya kwemheni
Kururamisa maitiro panguva dzekutinhira kwemvura | dzidzo
Ndinoita sei zvakanaka panguva yemheni?
Kururamisa maitiro panguva dzekutinhira kwemvura: Usambove uri nheyo yakakwirira
Maitiro panguva yekutinhira kwemakomo mumakomo
Mubvunzo wechidiki wenguva dzose mwana kana baba vanofanira kupindura munguva yekurera vana. Mheni uye kutinhira zvinowanzova nemigumisiro yemigumisiro yemheni.
Isu tose tinonzwa kutinhira-asi wkumusoro kunouya mheni uye kutinhira?
Ndinowanzonyengeterera mutsara iwoyo pasi sematani kuti ndivimbise mwanasikana wangu, uyo anowanzosangana nekutya kana kune mabhanan'ana muzhizha.
Mifambiro yakakodzera panguva dzekutinhira kunofanira kuzivikanwa!
asi Ko mheni uye kutinhira kunobva kupi? zvechokwadi? Mheni haisi chinhu chinopfuura magetsi. Kutinhira kunosanganisa mafungu uye inonzi acoustic discharge of lightning.
Iwe unenge uchinzwa mheni, kubuda, semheni. Ndeipi kupi mheni uye kutinhira kunobva kupi? yaizove yakanyanya kufanana: nei kune mheni uye kutinhira.
Pisai dutu nemheni uye kutinhira
Muzhizha, zuva rinopisa mhepo inopisa pedyo nepasi. Mhepo inopisa inobhururuka inomuka sezvavari kujeka uye inobva yasvika munzvimbo yakaoma pane imwe nzvimbo mudenga. Izvi zvinotarisa kuparadzanisa (kutonhora / kutonhora) kunovaka magetsi emagetsi, ayo, kana akawedzera simba, pakarepo ne timpani uye trumpets - kutinhira! - unotunura.
Ndeipi kupi mheni uye kutinhira kunobva kupi? Saka izvi zvaizojekeswa. Zvinokonzerwa nekukakavara munzvimbo dzakakwirira. Zvichiitika, mutengo uyu wemagetsi unosvika nyore kusvika pamabhiriyoni maviri volts. Kana flash inodonha, kutonhora kwema 30 000 degrees kunogona kuitika. Izvi zvinopisa mweya, izvo zvinowedzera zvakakurumidza uye zvino zvinokonzera mafungu emhepo.
Kukurudzira ruzivo rwehurukuro:
mahwindo ehurukuro akasununguka pamusoro pechinyorwa chemamiriro ekunze
Paakabvunzwa kuti: Apo mheni uye kutinhira zvinobvaSaka mumwe anofanira kutaura kuti zvose zviri zviviri zviratidzo zvepent-up uye kukonzera kukakavara mudenga.
Kururamisa maitiro panguva dzekutinhira kwemvura mune dzimwe nguva dzimwe nguva inosarudza nezvehupenyu nerufu. Kunyanya vana vanoita zvakawanda panze vanofanira naizvozvo kuziva mitemo inokosha zvikuru. Mheni inowanzouya sechishamisika, uye kana vana vachiwanzoudzwa kuti vadzokere kumba munguva, zvinogona kuitika kuti dutu rinokurumidza kudarika zvavanogona kuita.
Nzira yekufamba nayo zvakanaka kana kutinhira kwemvura iripo here? Chero mamiriro acho ezvinhu: ramba wakadzikama. Izvi hazvisi nyore kune vana vanozvidya mwoyo. Mitemo inogona kuve yotsigiro iwe pachako kuzvibata zvakanaka pamanzwi emvura uye usatiza uchitya.
Mheni inopararira kunyanya mune chinhu chapamusoro chiripo mumamiriro avo ezvinhu. Saka mutemo wakajeka ndewekuti uve muduku. Usambove uri nzvimbo yakakwirira pane iyo. Munzvimbo yakazaruka zvakakosha kudzivisa miti yakasarudzwa, masts, masvingo ematare, nezvimwewo.
Zivisai vana venyu munguva yakanaka pamusoro pekuita kwakanaka panguva dzemheni
zvechokwadi Maitiro panguva yekutinhira kwemvura Panzvimbo isina nzvimbo inofanirwa kunge iri yekutsvaga hove uye squat. Pasi haifaniri kutongororwa pamusoro penzvimbo huru nemuviri, tsoka dzinofanira kunge dziri pedyo pamwe chete muchikwereti, kuisa maoko muchikwata chakakomberedza makumbo.
Mheni inorova pasi, iyo inoyerera kunze uye saka iwe unenge usingafariri.
Pfungwa yepiri: dzivisa mvura! Mvura inoita magetsi zvakanaka chaizvo. Uye musoro nguva dzose inzvimbo yakakwirira pakushambira mudziva! Saka zvinofanira kuenda kunze kwekushambidza makungwa, madziva, nzizi, nezvimwewo. Vana vanoda kuziva kuti vanoda rutivi rwakachengeteka kumvura yose. Ndizvozvo mufambiro wakanaka panguva yekutinhira kwemheni.
Maoko kubva pamabote ematare uye kutsvaka pokugara pakati pematombo ari pasi. Muchikwata, vana vanofanirawo kudzosa maitiro avo, nokuti vanokurumidza kuva akakwirira-kunyange kana mhepo inotangira dutu ichi ichiri kukanganisa!
Kururamisa maitiro panguva dzekutinhira kwemvura musango kwakaoma. Pane zvakawanda zvinokonzera nzvimbo panzvimbo pfupi pano. Zvakare, tsvaga nzvimbo dzakadzika dzakadzika kana nzvimbo dzomusango uye dzikame pasi, dzivisa miti yakareba uye kazhinji usambogadzivirira pasi pemiti, zviri nani kusarudza rusvingo.
Kuchengetedza peji Kutinhira
Nyaya pfupi yevana - Kutinhira kwemvura
Kuberekwa muvechiri kuyaruka | dzidzo
Kukurudzira kubwinya kwevana
Balcony mbeu - zvikanganiso mukuchengetedza | ...
Pocket money | Dzidzo yevana
Nei yegoroke? | Kindergarten uye dzidzo
Mabhuku evana - Sei kuverenga kuchikosha? | dzidzo
Maitiro Evanhu Vezvemhuri | Dzidzo yevana
Rubatsiro, mwana wangu ari kureva nhema dzidzo
Vanapafabheji vanobhabhatidzwa | Dzidzo yevana
Hora mifananidzo yakaita sevakadzi
Mapeji ane mavara emifananidzo Varume nevakaroorana
Dzidzira mashizha zvidzidzo zvekuita zvepabonde